About us - Linhai Qisheng Rubber futhi Plastic Mkhiqizo Co., Ltd.
Fluoro Abicah hose
I-CAC Abicah Hose
Amakethi wepayipi abicah
Abicah Air Intake Hose / Turbo Inlet
Abicah Inter Cooler Turbo Hose Kit
abicah Radiator hose kit
Ipayipi elijwayelekile le-Silicone
I-hose coupler eqondile
ipayipi le-silicone heater
ipayipi lokunciphisa i-couper
abicah vacuum hose
i-hipp coupler hose eqondile
Thayipha ipayipi le-silicone
Ipayipi lenjoloba ye-extrusion
Isikhunta iraba hose
Egoqiwe Irabha Hose
I-Linhai Qisheng Rubber and Plastic Product Co., Ltd., etholakala endaweni yezimboni i-Youxi, e-Linhai, e-Zhejiang, ikude nge-15 km kusuka ku-Ningbo-Taizhou-Wenzhou
ukuphuma komgwaqo omkhulu no-8 km kude neTaizhou-Jinhua onguthelawayeka ophuma ngokufinyelela okulula kokuhamba.
I-Linhai Qisheng Rubber and Plastic Product Co., Ltd., etholakala endaweni yezimboni i-Youxi, e-Linhai, e-Zhejiang, ingamakhilomitha ayi-15 ukusuka ekuphumeni komgwaqo omkhulu wase-Ningbo-Taizhou-Wenzhou kanye ne-8 km kude ne-Taizhou-Jinhua onguthelawayeka ophuma ngokufinyelela okulula kokuhamba. Isungulwe ngo-1999, iLinhai Qisheng ihlanganisa indawo eyizi-18000㎡ nendawo yokwakha eyi-13000 ㎡. Amandla wonyaka wokukhiqiza wokucaciswa okuhlukahlukenehoses ingaphezu kwezingcezu eziyizigidi eziyisithupha. Kuze kube manje, uLinhai Qisheng unabasebenzi abangaphezu kwe-170, kufaka phakathi ochwepheshe bezobunjiniyela abangama-32.
ULinhai Qisheng ungumnikazi wochungechunge lokukhiqiza okuthuthukile, imishini yokuhlola kanye nelebhu. Imikhiqizo yethu eyinhloko ifaka i-hose yenjoloba ye-extrusion, i-hose rubber hose, i-hose abicah, i-fluorosilicone hose neminye imikhiqizo yochungechunge, esetshenziswa kakhulu emkhakheni wamaloli, amabhasi, izimoto zabagibeli, izimoto zobunjiniyela, izimoto zezolimo, izimoto zamasosha njll. Imikhiqizo yethu ilungile- itholwe ezindaweni zaseChina, eYurophu naseMelika ngokwanda okuqhubekayo kwedumela nemakethe. U-Linhai Qisheng ubelokhu ephakela iDongfeng Motor Corporation, i-AGCO Agriculture, i-JCB nezinye izinkampani isikhathi eside, futhi uzuze indumiso ngazwi linye kuzo.
U-Linhai Qisheng unikele ngokukhethekile ngekhwalithi yomkhiqizo. Ngethimba elinolwazi nesistimu yokulawula ikhwalithi enhle kakhulu, uLinhai Qisheng uthole i-IATF 16949: isitifiketi se-2016 wasisebenzisa kuzo zonke izigaba zokukhiqiza. Izinga lokuphatha elithuthuka njalo libeka isisekelo esiqinile sokuqina kwekhwalithi yomkhiqizo. Ukuqinisa ucwaningo lwesayensi nentuthuko, ukuthuthukisa ikhono lezobuchwepheshe kanye nemakethe yokuncintisana, futhi kuqinisekiswe ukuthuthukiswa okusimeme kwenkampani, uLinhai Qisheng usungule iTech Technology Center iminyaka eyisi-6 futhi waklonyeliswa njengebhizinisi likazwelonke lobuchwepheshe kanye nebhizinisi laseZhejiang elisuselwa kubuchwepheshe . Ngo-2020, uLinhai Qisheng uphathe ngempumelelo izitifiketi ezingama-20 Utility Model Patent,
Ngaphansi kwefilosofi yebhizinisi "wonke amapayipi azokwenziwa kangcono kakhulu kumakhasimende", simema ngobuqotho abathengisi bomhlaba wonke ukuthi babambisane nathi futhi bathuthukise intuthuko efanayo.
Indawo Yezimboni i-Youxi, iLinhai, iZhejiang, China
© Copyright - 2019-2020: Wonke Amalungelo Agodliwe. Hot Products, Ibalazwe